Mpitrandraka harena ambanin’ny tany : takina ny filazana ny tena marina momba ny tompona orinasa | NewsMada
Mpitrandraka harena ambanin’ny tany : takina ny filazana ny tena marina momba ny tompona orinasa
Antony iray lehibe nidiran’i Madagasikara ho mpikambana ao amin’ny EITI, ny taona 2012, ny tokony hamoahana ny mangarahara amin’izay rehetra mahakasika ny sehatry ny fitrandrahana harena ambanin’ny tany. Iray takina amin’izany ny “Fampahalalana ny tena marina momba ny tompona orinasa mpitrandraka”.
Natomboka, omaly, ny fikaonan-doha niantsoan’ny EITI sokajin’olona maro manomana tondrozotra ny fampahalalana ny tena marina momba ny tompona orinasa iray mpitrandraka harena an-kibon’ny tany izany. Fantatra tamin’ireo nandray anjara ireo, ny solontenam-panjakana, mpahay lalàna, sehatra tsy miankina, fiarahamonina sivily. Hatramin’ny nisian’ny EITI Madagascar, efa ahitana tatitra ny amin’ny vola miditra amin’ny fanjakana, saingy mbola tsy ampy. Hampifandraisina amin’izay fanatevenana ny mangarahara izay ny fampahafantarana izay tena marina ny tompon’ny orinasa iray manao ny asa fitrandrahana harena ambanin’ny tany ?
Ny zava-misy matetika, raha ny voalazan’ny EITI, tsy fantatra mazava ny tena marina momba ireo tompona orinasa mpitrandraka ireo. Raha eto Madagasikara, iza amin’ireo mpanao politika rehetra tsy an-kanavaka, amin’ireo tompon’andraikitra ambony amin’ny fitondram-panjakana, vahiny miditra eto, na mpitsara na ao amin’ny foloalindahy, iza ary firy marina amin’ireo nahazo fahazoan-dalana ara-dalàna no mitrandraka harena ambanin’ny tany ? “Tsy hisakanana azy ireo hanao izany asa akory ny antony fa ny hisian’ny mangarahara hahafantarana mazava ny antony sy ny fomba nahazoany fahazoan-dalana”, hoy Randriafeno Rajo Daniella, sekretera mpanatanteraka EITI Madagascar.
Fisorohana ny fanondranana an-tsokosoko
Raha misy ny mangarahara amin’ireo, tokony ho fantatra miaraka amin’izany koa ny hetra ampidiriny ho an’ny fanjakana, fisorohana ny fanondranana an-tsokosoko, hisakanana ny fanararaotam-pahefana ihany koa izany. Firenena manana harena an-kibon’ny tany betsaka, toa an’i Madagasikara, sy amin’ny tany afrikanina maro, matetika tsy mahita tombony avy amin’izany harenany izany.
Tombontsoan’i Madagasikara ny fahafantarana ny tena marina momba ireo olona ireo. Malaza amin’ny tsy fandoavan-ketra, mpanao asa famotsiam-bola, sa sanatria mpanao asa fampihorohoroana ? Koa betsaka ny tolokevitra avy amin’ireo mpivory. Saika itovian’ny rehetra, ohatra, ny fanambarana feno mikasika ilay olona, fonenany, hatramin’ny vady aman-janany. Misy ny tolokevitra sasany milaza fa tsy hatao ho an’ny rehetra ny filazana sasany fa voatokana ho an’ny fanjakana na ny mpanara-maso mahefa ihany. Ny antony, noho ny fiarovana azy ireo, ady amin’ny fisolokiana sy ny fifaninanana tsy ara-dalàna. Ny komitim-pirenena eo anivon’ny EITI no mandany farany ny tondrozotra tsy maintsy hampiharina.